Akụkọ - Blog -Tokyo ndị ahịa na-eleta maka 6S igwe ihe nyocha & nhazi ntọala & njem ụra akwa
Kemeghi bed isi
Ihe ngosi Live
Blog -Tokyo ndị ahịa na-eleta maka igwe nyocha 6S & ntọala nwere ike idozi & akwa akwa akwa ihe oriri
Foto Sirius Ding sere
Tlọ ọrụ Tokyo Mr.Tanaka kwadoro Beajom maka ọnwa ole na ole ugbu a. Anyị mbupụ mgbanwe isi na kwekọrọ ekwekọ matarasị ka North East Asia ahịa na-mgbe niile na-abawanye 23% elu YOY. Mana nke ikpe COVID-19 jidere, Maazị Tanaka kwugharịrị ọzọ ileta igwe igwe nri anyị maka nyocha na njikwa saịtị yana njikwa njikwa agịga ruo mgbe nke a Sep mgbe FMC gosipụtara na Shanghai Putong.
Idlọ ọrụ nhazi usoro nchekwa usoro ụfụfụ
Otutu oyi akwa gel memory foam foam with different ekweghị ekwe modul, enye matarasị ahaziri ọrụ ahụmahụ na engineered àgwà akwụkwọ ikike.
Dịka otu n'ime pọtụfoliyo ngwaahịa Beajom, ihe ndozi ụlọ ndozi enwere ike dọtara uche maka ndị ahịa Tokyo. Kpọkọtara ọnụ ase ndị nchegbu-ihe banyere akpaaka-ịgbado ọkụ iyi akara na-abụghị onye etre laser ọnwụ e.
MaazịTanaka, onye tụbara n'ọtụtụ ụlọ ọrụ na China kwuru. Site na echiche ya, ụmụaka ndị na - agagharị agagharị na - egosi usoro dị n'usoro n'ihe ọ bụla gbasara matrasị na ntọala nwere ike ịgbanwe. Onye nleta ahụ gbara ya na ndị otu ya ume karịa maka ire anyị na ahịa North East Asia. Comprehensive quality akara na ọkachamara ODM imewe ikike ga-eduga ngwaahịa na tide nke ifufe.
Beajom ga - apụta na - emepụta ohiri isi na Jiangsu Nantong, iji bụrụ ezigbo ngwongwo ngwakọ sitere na ohiri isi / topper / matraasi iji zuo ohi ngwaahịa ndozi. Site n'usoro ịmalite ịkwanye ọhụụ na ngwaahịa ọhụrụ, anyị ga-achọ ịmatakwu ndị na-ekesa anyị na ahịa Asia.
Na Tokyo, maka ịme ka laptọọpụ gị ma ọ bụ ịpị na draya ntutu gị, eletrik eletrik nwere ike ịdị ka ha ga-anabata ụdọ ike America gị mana voltaji bụ 100 kama North America nke 120 .N'ihi ya, ndụmọdụ pụrụ iche ịhọrọ ikike na ụdị mgbe ahaziri koodu mebere.
Post oge: Sep-17-2020
Nzaghachi ejikọtara ọnụ na ọganihu nke ndị Vietnam ...
Ikike magburu onwe otu Iwuli elu
Na ọganihu nke oge na de ...
Blog -Tokyo ndị ahịa na-eleta maka 6S mil ...
Kpọọ Anyị Ugbu a: +86 13795269951